Muwaadiniin Soomaali ah oo ku xayirnaa Hindiya oo dalka dib loogu soo celiyay | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Muwaadiniin Soomaali ah oo ku xayirnaa Hindiya oo dalka dib loogu...
Muwaadiniin Soomaali ah oo ku xayirnaa Hindiya oo dalka dib loogu soo celiyay
Dowlada Somaliya ayaa markii labaad u fududeysay iney ku soo laabtaan dalka muwaadiniin Soomaaliyeed oo gudaha dalka Hindiya ku xayirnaa tan iyo markii xuduudaha dalkaasi loo xiray xanuunka Covid-19.
Dowladda ayaa soo gurya celisay ku dhowaad 1,000 muwaadiniin ah oo ku kala xayirnaa dalalka kala duwan.
Muwadiniin gaaraya 128 qof oo isugu jira Rag iyo Dumar oo howlo caafimaad iyo waxbarasho badankood u joogay dalka Hindiya ayay Safaradda Soomaaliya ee dalkaas dib dalka ugu soo celiyo, iyagoo gaari doona magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe oo markoodii hore ay ka safreen.
Dadkan oo ka mahadceliyay sida Dowladda u garab istaagtay ayaa waxaa Garoonka dayuuradaha ee magalada Hyderabad ka soo sogootiyay Safiir ku-xigeen ahna la taliyaha Safaaradda Salim Cabdullahi Qalinle iyo diblomaasiyiin kale.
Dowlada Soomaaliya ayaa dhawanahanba ku hawlaneyd sidii mar kale muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xaniban dibedaha dib dalka loogu celin lahaa dalka, waxaana illaa hadda dalka lagu soo celiyey ku dhowaad kun qof oo kala joogay dalalka Kenya, Ugandha, Turkiga, Hindiya, Sacuudiga iyo meelo kale.